window7version ​အ​နိမ့်​က​နေ ​အ​မြင့်​ကို ​ဘယ်​လို upgrade ​လုပ်​မ​လဲ ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
window7version ​အ​နိမ့်​က​နေ ​အ​မြင့်​ကို ​ဘယ်​လို upgrade ​လုပ်​မ​လဲ
thet thet " window starter ​က​နေ window7​ကို​ပြောင်း​ချင်​ပါ​တယ် ... ​ဘယ်​လို​ပြောင်း​ရ ​မ​လဲ​ဟင် ..​ပြောင်း​လို့​ရော ​ရ​နိုင်​ပါ​သ​လား ..​ကျေး​ဇူး ​တင်​ပါ​တယ်"
​ပြောင်း​လို့​ရ​ပါ​တယ်. ​ဘာ​တွေ​ကို ​ဘယ်​လို​ပြောင်း​ရ​သ​လဲ ​ဆို​ရင်​တော့ ​ပ​ထ​မ​ဦး​ဆုံး ​ပြောင်း​လို့​ရ​တာ​တွေ​ကို ​ပြော​ပြ​ပါ့​မယ်. ​အဲ့​ဒါ​ကို ​ကြည့်​ပြီး​တော့ ​ဘယ်​ဟာ​ကို ​ပြောင်း​သင့်​သ​လဲ ​စဉ်း​စား​ပါ. version ​အ​နိမ့်​က​နေ version ​အ​မြင့်​ကို Upgrade ​လုပ်​လို့​ရ​ပါ​တယ်. ​သူ့ version ​အ​လိုက် ​အောက်​မှာ ​ဖော်​ပြ​ထား​ပါ​တယ်. ​အ​ရင်​ဆုံး ​ဘာ​လို့ ​ပြောင်း​ချင်​တာ​လဲ​ဆို​ရင် ​အ​ခု​လက်​ရှိ window ​အ​မျိုး​အ​စား​ကို ​မ​ကြိုက်​ဘူး ​ဒီ့​ထက်​မြင့်​တာ​ကို upgrade ​လုပ်​ချင်​တာ​မျိုး​လဲ ​ရှိ​သ​လို . Window ​တော့ ​တင်​ချင်​ပါ​ရဲ့ ​ဒါ​ပေ​မယ့် driver ​တွေ software ​တွေ​နဲ့ ​လို​အပ်​တာ​တွေ​ကို ​ပြန်​တင်​နေ​ရ​မှာ​က ​အ​လုပ် ​တစ်​ခု​လို ​ဖြစ်​နေ​တာ​မျိုး​တွေ​လဲ ​ရှိ​မှာ​ပါ. ​အ​ခု​လို window upgrade ​လုပ်​လိုက်​ခြင်း​ကြောင့် ​မိ​မိ​ရဲ့ ​ယ​ခင် ​တင်​ထား​တဲ့ driver ​တွေ​နဲ့ install ​လုပ်​ထား​တဲ့ software ​တွေ​ကို ​ဘာ​တစ်​ခု​မှ ​ထိ​ခိုက်​မှာ ​မ​ဟုတ်​ပါ​ဘူး.
Windows7Starter ​က​နေ ​ဆို​ရင် Home premium, Professional,Ultimate ​သုံး​မျိုး​မှာ ​ကို​ကြိုက်​တဲ့ version ​ကို upgrade ​လုပ်​လို့ ​ရ​ပါ​တယ်.
Windows7Home premium ​က​နေ​ဆို​ရင်​တော့ Professional ​နှင့် Ultimate ​နှစ်​မျိုး​မှာ ​ကို​ကြိုက်​တဲ့ version ​ကို upgrade ​လုပ်​လို့ ​ရ​ပါ​တယ်.
Windows7Professional ​က​နေ​ဆို​ရင်​တော့ Ultimate ​တစ်​မျိုး​ကို​ပဲ upgrade ​လုပ်​လို့​ရ​မှာ​ပါ.
​အဲ့​တော့ upgrade ​လုပ်​နည်း​ကို ​ပြော​ပြ​ပါ့​မယ်.
Start ​ရဲ့​အ​ပေါ်​မှာ Search Programs and Files ​ဆို​တဲ့ Search box ​လေး​တစ်​ခု ​ရှိ​ပါ​တယ်. ​အဲ့​ဒီ့​အ​ကွက်​ထဲ​မှာ ​ပုံ​ထဲ​က​အ​တိုင်း Anytime Upgrade ​လို့​ပဲ ​ရိုက်​ရိုက် Windows Anytime Upgrade ​လို့​ရိုက်​ရိုက် ​ကြိုက်​သ​လို ​ရိုက်​ရှာ​လိုက်​ပါ ​အ​ပေါ်​က result ​မှာ windows anytime upgrade ​ဆို​ပြီး​တော့ ​တွေ့​ရ​ပါ​လိမ့်​မယ်.
​တွေ့​တဲ့ Windows Anytime Upgrade ​ဆို​တဲ့ icon ​လေး​ကို ​နှိပ်​လိုက်​ပါ. ​အောက်​က​ပုံ​အ​တိုင်း Windows Anytime Upgrade ​လုပ်​ဖို့​အ​တွက် ​ပေါ်​လာ​ပါ​လိမ့်​မယ်.
​အဲ့​ထဲ​မှာ​မှ Enter an upgrade key ​ဆို​တဲ့​အ​ကွက်​ကို ​နှိပ်​ရ​မှာ​ဖြစ်​ပါ​တယ်. ​နှိပ်​လိုက်​ပါ. ​ပြီး​တာ​နဲ့ ​အောက်​က ​ပုံ​အ​တိုင်း Enter an upgrade key ​ဆို​တဲ့ xxxxx.xxxxx.xxxxx.xxxxx.xxxxx ​ဆို​တဲ့​အ​ကွက်​မှာ ​အောက်​က ​ပေး​ထား​တဲ့ ​ကီး​ကို ​ထည့်​လိုက်​ပါ. ​ကို​ပြောင်း​ချင်​တဲ့ version ​ရဲ့ key ​ကို ​ရိုက်​ထည့်​ရ​မှာ ​ဖြစ်​ပါ​တယ်.
(​မိ​မိ​ကြိုက်​တဲ့ ​တစ်​ကြောင်း​ကို​သာ ​ရိုက်​ထည့်​ရ​မှာ​ဖြစ်​ပါ​တယ်)
​ရိုက်​ထည့်​ပြီး​တာ​နဲ့ Next ​ကို ​နှိပ်​လိုက်​ပါ.
​ကဲ ​ရိုက်​ထည့်​ပြီး​ပြီ ​ဆို​ရင်​တော့ ​အောက်​က​ပုံ​အ​တိုင်း ​မိ​မိ​ထည့်​ထား​တဲ့ key ​ကို verifying ​လုပ်​နေ​တာ​ကို ​တွေ့​ရ​ပါ​လိမ့်​မယ်.
verify ​လုပ်​ပြီး​သွား​ရင်​တော့ ​အောက်​က​ပုံ​အ​တိုင်း ​ပေါ်​လာ​ပါ​လိမ့်​မယ်. I accept ​ဆို​တာ​ကို ​တစ်​ချက် ​နှိပ်​ပေး​လိုက်​ပါ.
​ပြီး​တာ​နဲ့ ​အောက်​က​ပုံ​အ​တိုင်း ​ထပ်​ပေါ်​လာ​ရင်​တော့ Upgrade ​ဆို​တာ​ကို ​ထပ်​နှိပ်​ပေး​လိုက်​ပါ.
​အဲ့​ဒါ​ပြီး​ရင်​တော့ upgrading window ​ဆို​ပြီး​တော့ upgrading ​လုပ်​နေ​ပါ​လိမ့်​မယ်. ​အ​နည်း​ဆုံး 10 ​လို့​ပြော​ထား​ပေ​မယ့် connection ​ပေါ်​မှာ ​မူ​တည်​ပါ​တယ်. ​အင်​တာ​နက် speed ​မြန်​ရင် ​မြန်​သ​လို​မျိုး ​တစ်​နေ​ရာ​နဲ့​တစ်​နေ​ရာ ​တူ​ညီ​မှာ​မ​ဟုတ်​ပါ​ဘူး. ​နိုင်​ငံ​ခြား​မှာ ​ရောက်​နေ​တဲ့ ​သူ​အ​ဖို့​က​တော့ 10 ​မိ​နစ်​လောက် ​ကြာ​ပါ​မယ်. ​အား​လုံး​ပြီး​သွား​ပြီ ​ဆို​ရင်​တော့ You have successfully upgraded your Windows7Starter edition. ​ဆို​ပြီး​တော့ ​ပေါ်​လာ​မှာ​ပါ.
​ဂေါ်​သိန်း November 4, 2011 at 9:38 PM
kyaw kyaw November 5, 2011 at 3:55 PM
​ညီ့​ကွန်​ပြူ​တာ​က ​ဝင်​ဒိုး​ရ ​တင်​ထား​တာ။​ဒါ​ပေ​မယ့် ​လိုင်​စင်​ဗား​ရှင်း​တော့ ​မ​ဟုက်​ဘူး။window7ultimate ​ပါ။​အ​ကို​ပြော​သ​လို stater ​အ​ပေါ်​က ​ဘောက်​ထဲ​က​နေ anytime upgrade ​ဆို​တာ​ရိုက်​ပြီး​ရှာ​တာ​ပဲ။​အဲ့​ဒါ​မ​တွေ့​ဘူး​ဖြစ်​နေ​တယ်။ ​ဘယ်​လို​လုပ်​ရ​မ​လဲ ​အ​ကို...
asiamoe January 10, 2012 at 4:28 PM
Window7Ultimate​ပြောင်း
​အ​ခု​လို ​လုပ်​တာ ​မ​ရ​ဘူး​ကို ​ပတ်စ်​က ​အ​သစ်​ထက်​တောင်း​တယ်​ကို ​နောက်​ထပ်​ရှိ​ရင် ​ထပ်​တင်​ပေး​ပါ​ဦး​ကို ​ကျေး​ဇူး​တင်​ပါ​တယ်။
Min Min February 13, 2012 at 12:23 AM
​အစ်​ကို ​ကျွန်​တော် ​အ​ကူ​ညီ​တစ်​ခု​လောက်​တောင်း​ချင်​တယ်.​အစ်​ကို​ကူ​ညီ​မယ်​လို့​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ် ..​ကျေး​ဇူး​လည်း​တင်​ပါ​တယ်..
​အစ်​ကို​ကျွန်​တော် ​ဝင်း​ဒိုး7​က​နေ XP ​ကို​ပြောင်း​တင်​ချင်​တာ ​ဘယ်​လို​လုပ်​ရ​မ​လဲ ...​သူ​များ​တွေ​က​ပြော​တယ် my computer ​ထဲ​က C: ​ဖိုင်​က format ​ချ​ရ​မယ်​တဲ့...
​အဲformat ​ချ​တာ ​မ​ရ​ဘူး​ဖြစ်​နေ​တယ် drive manager ​ထဲ ​ဝင်​ချ​တာ​လည်း​မ​ရ​ဘူး ...
​နောက်​ပီး ​ဝင်း​ဒိုး7 ​တင်​တုံး​က​လည်း partation ​ခွဲ​လို့​မ​ရ​ဘူး​ဖြစ်​နေ​တယ် ​အဲ​ဝင်း​ဒိုး ​တင်​တော့​လေ ​အ​ဆင့် ၉​လောက်​မှာ drive option(advanced)​ဆို​တာ​ပါ​ရ​မယ်​လေ ​အ​ခု ​အဲ​ဒါ​ရှာ​လို​မ​ရ​ဘူး၊ ​ပါ​ကို​မ​ပါ​တာ ...​အဲ​မှာ​လေ refresh ​နဲ့ load drive ​ဆို ​တာ​ပဲ​ပါ​တယ် .
​နောက်​ပီး​ဝင်း​ဒို​တင်​ရာ​မှာ​လေ ​အ​ဆင်1 ​မှာ install ​မှာ ​လည်း your computer repair ​ဆို ​တာ ​ပါ​မ​လာ​ဘူး ...​အဲ​မှာ ​လည်း what do you inst:.........​ဆို​တာ​ပဲ​ပါ​တယ်
​နောက် ​ပီး ​ကွန်​ပျူ​တာ​ကိုbios ​ထဲ​ဝင်​ကြည့်​ချင်​တာ ​ဝင်​လို့​မ​ရ​ဘူး​ဖြစ်​နေ​တယ်..
delete ,Esc,ctrl+Alt+(S,Esc,enter),f1,f2,f10,f12​အဲ​ဒါ​တွေ​အ​ကုန်​လုပ်​ကြည့်​တယ် ​တစ်​ခု​မှ​မ​ရ​ဘူး ​ဘယ်​လို​ပေါ်​လာ​လ​လဲ​ဆို​တော့ window start normally ​ရယ် ​တောက်​တစ်​ခု​က​တော့ ​မ​သိ​တော့​ဘူး ​အဲ​နှစ်​က ​တစ်​ခု​ခု​ရွေး​ခိုင်း​တယ် ​ဘယ်​ဟာ​နှိပ်​နှိပ်​ဝင်း​ဒိုး​ပြန်​တက်​လာ​တယ် ​ဒီ​အ​တိုင်း​ပဲ​ဖြစ်​နေ​တယ် bios ​ထဲ​ဝင်​လို့​မ​ရ​ဘူး ​ဗျာ ​အဲ​ဒါ​လေး​တွေ​ကို​အစ်​ကို​ကူ​ညီ​ပါ​နော်..
Min Min February 13, 2012 at 12:27 AM
​ကျေး​ဇူး​တင်​ပါ​တယ် ​အစ်​ကို ​ရာ ​ပျော်​ရွှင် ​ချမ်း​မြေ့​ပါ​စေ​ဗျာ ...
zaw April 2, 2012 at 6:42 PM
Ko Kyaw May 6, 2012 at 9:31 PM
​အ​ခု​လို upgrade ​လုပ်​ရင် ​မူ​ရင်း licence ​များ ​ပျက်​ပြယ်​သွား​နိုင်​သ​လား​ဗျာ... ​ကျွန်​တော့ computer ​က Home premium ​လိုင်​စင် ​ဗား​ရှင်း​မို့ ​လို့​မေး​ရ​တာ​ပါ ​ခင်​ဗျ... ​သူ့ ​ရဲ့ ​မူ​ရင်း Licence Code ​တွေ​က computer ​ဝယ်​က​တည်း​က ​ပါ​လာ​ပါ​တယ်​ဗျ... ​အ​ခု​ပေး​ထား​တဲ့ ​တစ်​ခြား Code ​တွေ​နဲ့Upgrade ​လုပ်​လို့​ရ​နိုင်​ပါ​သ​လား ​ဆို​တာ​ကို ​ကျေး​ဇူး​ပြု​ပြီး ​ဖြေ​ကြား​ပေး​ပါ​ဗျာ...
Joe August 1, 2013 at 12:30 PM
Heinchitzaw Heinihitzaw January 31, 2014 at 3:57 PM